ShweMinThar: May 2017
ကလေးများ တီဗွီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဆော့မက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျူရှင်များလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ရေးမပျက်စေသင့်ပါ။ ကလေးတိုင်း တစ်နေ့ ( ၁၀ ) နာရီအိပ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးအိပ်ရေးဝမှသာလျင် အားအင်ဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မနက်စာ ၀အောင်စားပါ။ အဟာရ ရှိအောင်စားပါ။
အခုခေတ်ကလေးတော်တော် များများဟာ မနက်စာကို လောလောစားပြီး ကျောင်းတက်လေ့ရှိပါတယ်။ အချို့ ကလေးများ ကျောင်းသွားတဲ့ ကားပေါ် မှာထမင်းကျွေးတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ညက်ညက်ဝါးစားဖို့ မပြောနဲ့၊ ကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့တောင် အချိန်လုရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကလေးများ ၀တစ်လှည့်၊ ငတ်တစ်လှည့် ဖြစ်နေတတ်ပြီး ကျန်းမာရေး အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။ မနက်စာဟာ လူတိုင်းအတွက် တစ်နေ့တာ အဓိကအင်အားဖြစ်တာကြောင့် မနက်စာကို ၀အောင်ကျွေးပါ။ ကောင်းအောင်ကျွေးပါ။
၃။ ရေ လုံလုံလောက်လောက် သောက်ခိုင်းပါ။
မူလတန်းအရွယ်ကလေးများဟာ အလွန်အဆော့မက်တတ်ပါတယ်။ ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ အလွန်လုပ်ရှားပါတယ်။ ကလေးကို ရေအလုံအလောက်သောက်ဖို့ အားပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ ခဲဖျက် အလွန်သုံးတဲ့ အကျင့်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ဖျောက်ပေးပါ။
တစ်ခုခု ရေးမှားရင် ခဲဖျက်ဖျက်တယ်။ ခဲဖျက်သုံးတာ ဘာမှအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသုံးလွန်သွားရင် တစ်ခုခု အားနည်းနေပါပြီ။ အနည်းဆုံးတော့ သူရေးနေတဲ့ စာမှာ သူစိတ်မပါဘူးဆိုတာ ပြသနေပါပြီ။ ခဲဖျက်ကို အကြိမ်ရေ အသုံးနည်းစေခြင်းဟာ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားအောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကလေးကိုယ့်ဝန်ကို နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ကလေးကျောင်းတက်ပြီဆိုရင် အချို့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ကိုယ့်ဝန်ကို ထမ်းရပါတော့မယ်။ ဥပမာ အပေါ့ အလေးသွားတာမျိုး၊ ကိုယ့်စာအုပ်ခဲတန်ကို လွယ်အိပ်ထဲသိမ်းဆည်းတာမျိုး၊ ချမ်းတဲ့အခါမှာ အနွေးထည်ဝတ်ပြီး ပူတဲ့အခါမှာ ပြန်ချွတ်တတ်တာမျုိုး၊ ကိုယ့်အ၀တ်အစား၊ ရေးဗူး၊ ထ္မင်းကျိုင့်၊ ထီး စသည်တို့ကို ကျောင်းမှာ မမေ့ကျန်ခဲ့တာမျိုး မိဘများစတင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ အ၀တ်အစားမှာ အပြိုင်အဆိုင်ကင်းပါစေ
တကယ်လို့ ကျောင်းဝတ်စုံရှိရင် ကျောင်းဝတ်စုံပဲ ၀ယ်ဝတ်ပါ။ ပိတ်စမကောင်းဘူးဆိုပြီး အပြင်ဆိုင်မှာ အထူးချုပ်သွားချုပ်တာမျိုး၊ ကျောင်းက ဖိနပ်မစီးပဲ ၊ အရောင်တူ Brand ၀ယ်စီးခိုင်းတာမျုိုး၊ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ အပြိုင်အဆိုင်ဝင်သွားရင် ကလေးအတွက် ဘာမှမကောင်းပါ။
၇။ ကလေးရဲ့ ဖေါ် ပြတတ်မူကို အလေးထားပါ။
အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို သူ့အရွယ်နဲ့သူ ဖြောင့်အောင် ပြောပြတတ်ရဲ့လား၊ အခက်အခဲတစ်ခု တွေ့လာရင် မိဘကို ရှင်းအောင်ပြောပြတတ်ရဲ့လား၊ ပြောရဲဆိုရတာမျိုး ဖြစ်ရဲ့လား၊ စသည်တို့ကို မိဘများဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဖုန်းတို့၊ ဂိမ်းတို့၊ အိုင်ဘက်တို့ အရမ်းဆော့တဲ့ ကလေးများဟာ ဖေါ်ပြတတ်မူမှာ အားနည်းရုံမက စဉ်းစားဥာဏ်ပါ နောင့်နှေးစေတတ်ပါတယ်။
၈။ အိမ်သာမှန်မှန်တက်တာလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကလေးကိုပြောပေးပါ။
ကလေးတော်တော်များများဟာ ဆော့လို့ ပျော်လို့ ကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အိမ်သာတက်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ အချို့ ကလေးများဟာ တက်ဖူးနေကျ အိမ်သာမဟုတ်ရင် ဘယ်လောက်ပဲ အလျင်စလိုဖြစ်ဖြစ်၊ အောင့်ထားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အတွက်လည်း မကောင်းတတ်တာမို့ ကလေးကို နားလည်အောင် ဖြောင်းဖြ ပေးသင့်ပါတယ်။
၉ ။ ကလေးရဲ့ အမြင်အာရုံကို ကာကွယ်ပေးပါ။
စာကျက်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အလင်းရောင် အပြည့်အ၀ ရပါစေ။ စာကျက်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာရေးတဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ်၊ ထိုင်နည်းမှန်ကန်ပါစေ။ ထိုင်နည်းမမှန်ကန်ရင်လည်း မျက်စိထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ တီဗွီကားတွေ အကြာကြီးကြည့်တာ၊ အင်တာနက်ကို အကြာကြီးသုံးတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ဘက် ဆော့တာတွေ အားလုံး မျက်စိအလွန်ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။
၁၀။ တီဗွီ အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ကြည့်ခိုင်းပါ။
မိဘများအနေနဲ့ မိမိကလေးများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမူ ပေါ် မူတည်ပြီး ကာတွန်းကား၊ တောရို်င်းတိရစ္ဆာန်ကားများ၊ Discovery လုိုကားများ၊ အကျုိုးရှိမယ်ထင်တဲ့ကားများ အားလုံးကို အကန့်အသတ်နဲ့ ကလေးကို ပြပေးလို့ ရပါတယ်။
၁၁။ ကလေးများ အိမ်စာကို ကူညီပေးပါ။
မူလတန်းကလေးများ၊ အထူးသဖြင့် ပထမတန်းကလေးများဟာ မိမိဖာသာ စာမလုပ်တတ်သေးပါ။ မိဘများအထိုက်အလျှောက်ကူညီနိုင်ရင် ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ မိဘများကူညီတယ်ဆိုတာ မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်တာမျုိုး မဟုတ်ပါ။ ကျူရှင်ဆရာမ အများကြီးခေါ် ပေးခိုင်းတာမျိုးလည်း မဆိုလိုပါ။ သူတို့ ကိုယ်စား မိဘက ၀င်လုပ်ပေးတာမျိုးကို ပိုမို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ကလေးအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လမ်းညွန်သင့်တာလမ်းညွန်၊ သင်ကြားပေးသင့်တာကို သင်ကြား၊ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေထံ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းသင့်တာတွေကို မေးမြန်းစေတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကလေးကို ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်သလဲ၊ အဖြေရအောင် ဘယ်လိုချဉ်းကပ်သင့်သလဲ စသည်ဖြင့် တစ်ဆင့်ချင်း လမ်းပြသွားနိုင်ရင် ပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။
၁၂။ လုံခြုံ မူအသိ ကြွယ်ဝစေခြင်း
လုံခြုံ မူအသိဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်ငယ်လေ၊ စိုးရိမ်ရလေ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးအ၀င်အထွက်၊ လှေခါး အတက်အဆင်း၊ စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ ၀ါယာ ဆော့ကက့် ပေါက်နဲ့ အထိအတွေ့၊ ကားလမ်း အဖြတ်အကူး၊ လူစိမ်းနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ၊ အမြင့်တက်ခြင်း၊ ရေကစားခြင်း၊ မီးကစားခြင်း စသည့်စသည့် တို့မှာ အထူးဂရုစိုက် သင်ကြားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၁၃။ ဆက်ဆံရေး ချောမွေ့ အောင် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း
ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် ငယ်စဉ်ကတဲက စတင်ပျိုးထောင်ပေးလို့ ရပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ လူကိုလေးစားတတ်အောင်အရင်သင်ပေးရပါတယ်။ လေးစားခြင်းဟာ ဆက်ဆံရေးရဲ့ အခြေခံအုပ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူများပြောစကားကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်တတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးထားရပါမယ်။
ကိုယ့်ပြောချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်စဉ်းစားနေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖေါ်ပြတတ်ဖို့၊ ပြောရဲဆိုရဲအောင် အရင်သတ္တိမွေးပေးရပါတယ်။
ဂတိတည်ရမယ်။ ရိုးသားမယ်။ စဉ်းစားတဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်။ ဒီအဆင့်အထိဆိုရင် လူချစ်လူခင်ပေါဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။
၁၄။ ကလေးစိတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ကလေးလုံလောက်တဲ့ တက်ကြွမူ ရှိရဲ့လား၊ အကောင်းမြင်တဲ့ အကျင့်ရှိသလား၊ အရွယ်နဲ့ မလိုက်ပဲ ဒေါသအရမ်းကြီးနေသလား၊ အမြဲတမ်းပဲ တစ်ခုခု စိုးရိမ်နေတတ်သလား၊ ကလေး ဖိအားအရမ်းများနေသလား၊ စသည်ဖြင့် ကလေးများရဲ့ အပြုအမူကို မိဘများက ဂရုတစိုက် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ခုခု မူမမှန်ဘူးဆိုရင် စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ မိဘများတစ်ခု လုံးဝလက်ခံထားရမှာက စိတ်ဆရာဝန်ပြသခြင်းဆိုတာ စိတ္တဇ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 8:26 AM No comments:
Labels: Lifestyle, ပညာရေး၊
ကျောင်းပိတ်ရက် တစ်ရက်က သမီးကျောင်းလွယ်အိတ် လဲပေးဖို့ စာအုပ်တွေထုတ်လိုက်တော့ လွယ်အိတ်ထဲက ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း များစွာ ထွက်လာသည်။ လေဖောင်း ထုပ် သရေစာအမျိုးမျိုးက ထွက်ကျသော မုန့်ကျိုး မုန့်ကြေတွေလည်း မနည်းပါ။ လေဖောင်းထုပ် အခွံက နှစ်ခု၊ သုံးခု၊ စာကလေးခွေ အစအနတွေ၊ ပီကေအခွံတွေ၊ ခဲတံချွန်စာတွေ ကပ်ခွာ အရုပ်ကားတွေ၊ သည်အထဲက ထွက်လာတာကတော့ ဆီးသီးလုံး လောက် ဖန်ဂေါ်လီလုံးတွေ ဖြစ်ပါ၏။ ဒါကတော့ နည်းနည်း ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နေလို့ သမီးကိုမေးရပါသည်။ သမီးနှင့် ဖန်ဂေါ်လီလုံး က နည်းနည်းဝေးသည့် ကစားစရာ မဟုတ်လား။
“ဖန်ဂေါ်လီလုံးတွေက ကစားဖို့ ဝယ်တာလား လှလို့ ဝယ်တာလား သမီး”
“ကစားဖို့ဝယ်တာ မေမေ… ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ပစ်ကြတာ သမီးနိုင်တာ မနည်းဘူး… အခုက ရှုံးကုန်လို့”
ရှုံးကုန်လို့ ဆိုတာတောင် အိတ်ထဲက ဆယ်လုံးကျော်ကျော် ရလိုက်သည်။ သမီးဘယ်အချိန် ကစားပါလိမ့်လို့လည်း တွေးမိ ပါသည်။ ကျောင်းက အိမ်နှင့်နီးတော့ ကျောင်းတက်ချိန် မနက် ရှစ်နာရီခွဲကို ရှစ်နာရီခွဲမှ ထသွားလျှင်တောင် မီတာ ဆိုတော့ ကျောင်းချိန်နီးမှ လိုက်ပို့ နေကျ။ မနက် ဆယ်နာရီခွဲ မုန့်စား ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ နာရီဝက်လောက်တော့ ကစားနိုင်ကြသည်။ သည် အချိန်ကလေးမှာ အလုအယက်ကစား ကြရှာ ထင်ပါရဲ့။ ဂေါ်လီလုံးလေးတွေကိုတွေ့မှ သမီးတို့လို ကလေးများကစားချိန်ကို တွေးမိရပြန်ပါ၏။ ကလေးတွေခမျာ “စာ”ပြီးရင်း “စာ” နေကြရတာမဟုတ်လား။ သည်ခေတ်ကလည်း ကျောင်းကြီးစာပြီးပြန်တော့ ကျောင်းငယ်စာက ဆီးကြို နေကြသည်။ ဆရာမောင်စွမ်းရည် ၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲကလို “ကျူသေ” “ကျူရှင်”တွေ ရှိသေးသည်။ စာသင်ကျောင်းကြီး ကျောင်းလွှတ်ချိန် ခေါင်းလောင်းသံသည် ကျူရှင်ကျောင်း၏ ကျောင်းတက်ချိန်ခေါင်း လောင်းသံလို့လည်း ပြောနိုင်သည်။ မိဘတွေက ကျောင်းပေါက်ကစောင့် ပြီး ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ကောက်သင်းကောက်ပြီးသည်နှင့် ကိုယ့်အတန်းပိုင်ဆရာမ ကျူရှင်ပြဖို့ ငှားထားသော ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်ကို တစ်ထွေးကြီး လိုက်ကြရပြီ။ သမီးကတော့ ကျူရှင်မတက်စာရင်းပေးထား လို့ အိမ်ကိုတန်းပြန်ရုံ။
ကျောင်းပြန်ချိန် ညနေ ၃ နာရီ လောက်ကနေ ၇ နာရီလောက်အထိ သမီး၏ စိတ်ကြိုက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကစား၊ ရေချိုး၊ အိမ်စာလုပ်၊ တီဗီကြည့်၊ ကွန်ပျူတာနှိုက်။ သမီးနှင့် ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတချို့က ကျူရှင်မှာ စာဟောင်းကို တစ်ခေါက် သင်နေရချိန်မှာ ကျွန်မကတော့ သမီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ထားသည်။ ငယ်တုန်းငယ်ခါ သည်အရသာကလေးမှ ရပါစေတော့ သဘောဖြင့် ကျူရှင်မပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိဘတချို့ ကတော့ ကျူရှင်မထားသည့်အတွက် ကလေး ပညာရေး နှောင့်နှေးမှာပေါ့တဲ့။ ကျူရှင်ထားတော့ကော ပညာရေးက ရှေ့ရောက်လို့လား။ ဒါကိုလည်း ကျွန်မဆန်းစစ်ကြည့် မိပါ၏။ ကျောင်းမှာလည်း သည်စာ၊ ကျူရှင် မှာလည်း သည်စာ၊ အိမ်ရောက်ပြန်တော့ မိဘကလည်းသည်﻿စာ ဆိုတာမျိုး တော့ ကလေးကို နှိပ်စက်နေတာနှင့်ပင် တူနေသည်။ တစ်ချိန်လုံး သည်စာ တစ်ပုဒ်ပဲကလေးက သင်ယူ နေရသည်။ ကလေးအတွက် တခြား challenge လုပ်စရာမရှိ။သည်တော့ ကလေးလေးတွေဘက်က ဆုံးရှုံးရတာတွေက အများသား။ အချိန်ဆုံးရှုံးသည်။ လွတ်လပ်မှု ဆုံး ရှုံးသည်။ တခြားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ဆုံး ရှုံးရသည်။ ဒါက ကျွန်မစဉ်းစား တာပါ။
ကျောင်းဆရာမဘဝကို ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျွန်မတို့ ကာလတွေ တုန်းကတော့ ကျူရှင်မပြခဲ့ဘူးလား။ ကျွန်မတို့ ဆရာမဘဝတုန်းကလည်း ကျူရှင်တွေ တရုန်းရုန်းပါပဲ။ ပူပူလောင်လောင် စိတ်အိုက်လူအိုက်၊ စိတ်မော လူမော သင်ရခြင်း ဖြစ်၍ ကလေးတွေကလည်း မိဘတွေကြောက်ရလို့သာ ရောက်လာကြရတာများသည်။ တစ်နေကုန်ကျောင်း မှာ ချွေးတစ်လုံးလုံး၊ လူနှင့်အခန်း မဆံ့ရင်ကန် ထည့်ထားသည့်အခန်းထဲမှာ ပဲစေ့ ကလေးတွေ ကို ရေနွေးဆူ ဆူနှင့် ပြုတ်ထားသလို ကလေးတွေခမျာ အပူနှင့်နူးနပ်နေကြရရှာသည်။ သည်ကလွတ်ပြန်တော့ နောက်ထပ် စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲ ဝင်ရတာကလည်း ရက်စက်စွာတွန်းပို့သလို ဖြစ်နေရတာမဟုတ်လား။ ကျူရှင် ခွဲရေးတွဲရေးမှာ တွဲရေးမှာ လူများ နေတော့လည်း ခက်သားပင်။
“ကျူရှင်ထားပါ ဆရာမရဲ့.. ကျူရှင်ထားတော့ စာမေးပွဲပါမယ့် မေးခွန်းတွေ ကြိုသိရတာပေါ့… ကလေးက အဆင့်ကောင်းတယ်… ဆရာမကလည်း ဦးစားပေးတယ်.. ကျူရှင်မထားရင် ကလေးက အတန်း ထဲမှာ အင်မတန်မျက်နှာငယ်ရတယ်… ဆရာမတွေက သူတို့ကျူရှင်မထားရင် ကလေးကို ဂရုမစိုက်ချင်ဘူးရယ်”
“အဲသလိုတောင် ဖြစ်ပျက် နေကြပြီလားရှင်… ဆရာ ဆရာမ တွေမှာ အဲသလို စိတ်နှလုံးရှိနေကြ ပြီလား”
ကလေးအမေကို ပြန်မေးတော့ ကလေးမအေက ကျွန်မကို ကျောင်းဆရာမလူထွက် ညံ့ရန်ကော ဆိုသည့် မျက်နှာဖြင့် ခပ်ပြုံးပြုံး ပြန် ကြည့်သည်။ တစ်လောကလုံးက ကလေးတွေ ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ ပညာကို အချိန်နှင့်အမျှ ယူနေကြချိန်မှာ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ကလေးကို အအား ထားရတာတုန်းဆိုသည့် မျက်နှာပေးကလည်းပါသေးသည်။
“ကျောင်းမှာက အကြမ်းသင် ဆရာမရဲ့… ကျူရှင်ကျမှ အချော သင်တာ… ကျူရှင်မတက်ရင် စာမတတ်ဘူး”
ကျွန်မပင် လန့်သွားမိပါ ၏။ ကျောင်းစာမှာ အကြမ်းသင် အချောသင်လို့များ ရှိသေးရော့လား။ မိဘတွေရင်ထဲ ဘယ်က ဘယ်လို ရောက်လာသည့် အတွေးအခေါ်တွေပါလိမ့်။ ကလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် နေကြသလဲ လို့ မေးကြည့်တော့ ကစားဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး ဆရာမရယ်တဲ့။ ကစားတဲ့ခေတ် ကုန်ပါပြီတဲ့။ ကျွန်မကတော့ ဘာမှ မဝေဖန်လိုက်ပါ။ ကျူရှင်ပြသည့် ဆရာ ဆရာမတို့ကို ကျွန်မ စာနာနိုင်ပါသည်။ ကျူရှင်က ဝင်သောဝင်ငွေက မစို့မပို့ ဆိုပေသိ (တချို့တော့ စို့စို့ပို့ပို့ ရကြသတဲ့) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်စရိတ်ကလေးတော့ ကာမိရတာမဟုတ်လား။ ပြီးတော့ စာပြပြီး ဝင်ငွေရှာတာ ဘာအပြစ် ရှိလို့လဲ။ သည်အထိက ကိစ္စမရှိ။ သည်ကကျော်လျှင်တော့ လောဘတွေ ပါလာလိမ့် မည်။ မောဟတွေ ပါလာလိမ့်မည်။ မိဘအချင်းချင်း ကလေးပညာရေး ဂုဏ်ပြိုင်ကြသည့် ကြားမှာ ဆရာ ဆရာမတွေက မရည်ရွယ်ဘဲ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေး ဒိုင်ဖြစ်ရတာတွေ ကြားနေရသည်။ ဆရာ ဆရာမတိုင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါ။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သည့် ဆရာ ဆရာမတွေ ရှိကြပါသည်။ မလွှဲသာလို့ ကန်တော့ငွေကို လက်ခံကြရ﻿ပေသိ ကိုယ်သင်ရသည့် ကလေးကို ထက်သည်ထက် ထက်အောင်၊ တော်သည်ထက်တော်အောင်၊ သင်ကြားပြသပေးကြသည့် ဆရာ ဆရာမ တွေရှိကြသည်။ အချို့အချို့သော ဆရာ ဆရာမတွေကတော့ မိဘများနှင့် ဇယ်ခုတ်တမ်းကစားနေကြသလို ကိုယ့်လက်ထဲ ဇယ်များများရဖို့ လုံးပမ်းနေကြတာတွေ မြင်နေ ကြားနေရတာ စိတ်မကောင်းစရာ။
“ဖွေးဖွေး အဆင့်မရဘူးဆို… အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ဖွေးဖွေးကို ကျူရှင်ထားပါလို့… ကျူရှင်ထားရင် အဆင့်ရတယ်… ကျွန်မသမီးက အခုတစ်ပတ် စာမေးပွဲမှာ အဆင့် တစ်လေ… ပြီးခဲ့တဲ့လက အဆင့် ၅ ဆိုလို့ ဆရာမကို ရန်သွားတွေ့ ရသေးတယ်”
“အော် အော်… ရန်တွေ့လို့လည်းရသားပဲ… သမီး အတန်းကြီး လာရင်တော့ တစ်မျိုး စဉ်းစားရမှာပေါ့… အခုတော့ ကလေးကို ဖိအားမပေး ချင်သေးလို့ပါရှင်… ကစားချိန်၊ နားချိန်ကလေး ရအောင်လို့ပါ”
“လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်ကလေးတွေများ ကစားနေကြတာ တွေ့လို့တုံး ဆရာမရဲ့”
ဟုတ်ပေသားပဲ။ မြို့ဆိုတော့ ကစား စရာနေရာကို လမ်းလို့ သတ်မှတ် ကြတာမဟုတ်လား။ ကလေးတွေ ကစားဖို့နေရာ ကွင်းကျယ်ကျယ်မရှိ။ ကျွန်မတို့မြို့သစ်မှာ ကျွန်မတို့ ရောက်စက မြင်ခဲ့ဖူးသော ရပ်ကွက် ဘောလုံးကွင်းဆိုတာတွေကလည်း အခုတော့ အကွက်တွေရိုက်ပြီးကြပြီ။ ဘောလုံးကွင်းတွေကို ဘယ်သူက ရောင်းကြလို့ ဘယ်သူတွေက ဝယ်နေကြတာတုံး။ ကျွန်မမသိပါ။ အများအားဖြင့် မရှိတော့တာတော့ သေချာပါသည်။
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကတော့ ရွာပြင်ထွက်လိုက်တာနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ကွင်းပြင် တစ်မျှော်တစ်ခေါ်ကြီး။ ရွာပြင် မထွက်ချင်တော့လည်း အိမ်ဝိုင်းကြီးတွေက အကျယ်ကြီးတွေ။ တလင်းပြောင်ပြောင်မှာ ကစားနိုင် ကြသည်။ ဝိုင်းထောင့်က သစ်ပင် ရိပ်တွေမှာ ကစားနိုင်ကြသည်။ ကစားခဲ့ကြတာတွေကလည်း ကစားနည်းတွေ စုံလွန်းလို့ တစ်ခါတစ်မျိုး မရိုးနိုင်ကြပါ။ ရွှေစွန်ညို၊ ဘီးသည်၊ ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ၊ အရူး မကြီးမစာဥ၊ ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး၊ ဆီမီးခွက်ကြီး ဂလောင်ဂလင်၊ မအေးခြင်ထောင်ထောင်၊ ဧည့်သည် လာ အိမ်သူဖယ်ပေး၊ စိန်ပြေးတမ်း၊ တူပုန်းတမ်း၊ တိုင်ပုတ်တမ်း၊ ဇယ် တောက်တမ်း၊ ဖန်ခုန်တမ်း၊ က တမ်း ခုန်တမ်း။
“ငပိတစ်လက် ဆားတစ် လက်… ရေနံအိုး အောက်ပိုးကျိုက် … လိုက်”လို့အော်ခဲ့ရတာတွေက ကော။ လိုက်ဆိုတာနဲ့ လိုက်ပေ တော့။ ဗြောင်နောင်နောင် ပဗေပေး ဂျိ။ ကစားရင်းက စာသံကဗျာသံ ကလေးတွေပါပါလို့ ဝမ်းခေါင်းသံ ပါအောင် အော်ကြရတာကို မမေ့ နိုင်။အသံချင်းပြိုင်ကြရတာကလည်း ပျော်စရာ။
ကလေးတွေ အရွယ် စုံ။ တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက် ဆွဲကြလို့။ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်။ အထွေးဆုံး ကလေးက နောက်ဆုံးမှာ နေရသည်။ ရှေ့ ကလေး နှစ်ယောက်က လက်ချင်းယှက် ထားကြတော့ ရွှေတံခါးကြီး ဖြစ်ရသည်။
စိတ်ကူးထဲရှိသမျှ ဥာဏ်ထွင်ပြီး ပြောရတာဆိုတော့ သူကြီးအိမ်လည်း ပါသည်။ ကြီးတော် ဒေါ်ချုပ်အိမ်လည်း ပါသည်။ တစ်ခါတော့ ကျွန်မအဘ ဘိုးကံသာအိမ်လည်း ပါချင်လို့ ဘိုးကံသာအိမ်က ပါလို့ အော်လိုက်သည်။ တံခါးဖွင့်မည့်သူက “ဘိုးကံသာစော်နံ ပြန်လိုက်ဦးတဲ့” အဘက ဆူလိုက်တာ။ “သည်ကလေးတွေနှယ် ငါ့နာမည် ထည့်ကစားရသယ် လို့ကွာ…လူက မှ ဖျားလို့ ရေမချိုးနိုင်ရတဲ့ကြားထဲ” တဲ့။
သည်ခေတ်ကလေးတွေခမျာတော့ ကစားချိန်တွေမှာ ကျူရှင်ကို ပြေးကြရပြီ။တချို့က မနက်ကျောင်းကြီး မတက်ခင် ဝေလီဝေလင်း ငါးနာရီလောက်ကပင် ကျူရှင်ကို ပြေးကြရသည်။ မိဘများခမျာလည်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် အရောက်ပို့ကြရတာ တစ်တာဝန်။ တချို့ကတော့ ညနေကျောင်းကြီး လွှတ်ချိန်မှာ ဇော တိုက်နေကြရပါ၏။ အတန်းကြီးသူ တွေကတော့ မြို့ထဲက ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်သူ့ကျူရှင်ကကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း အပ်ရ ပို့ရ ကြိုရ။ ဒါလည်း ကစားနည်းတစ်မျိုးများလား။
အနင်းခံရတဲ့ စပါး သန်သတဲ့။ ကလေးတွေ ခမျာ စပါးပင်မဟုတ်ပါ။ နင်းလေ ကျိုးကြေလေ။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေး ကူညီနေသော ကြီးတော်က သူ့သမီး အဝေးသင် ကျောင်းသူ ကျူရှင်တက်နေရတာကို ပြောပြသည်။ ကျူရှင်ခ တစ်သိန်းနှစ်သောင်း လောက်ကျမှာ ဆိုတော့ ငွေတိုးနှင့် ချေးပေးလိုက်ရသည်ဆိုပါ၏။ ကျွန်မတို့ကလည်း သမီးငယ်သေးလို့သာကိုး။ အတန်း ကြီးလာသည်နှင့် ဆိုင်ရာ နတ်ကွန်းကို နတ်ပြ သွားရဦးမှာပေါ့။ ပညာ ဆိုတာကလည်း တံခါး အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်ရတာဆိုပေသိ ပညာစော်နံ ပြန်လိုက်ဦး လုပ်လို့မရနိုင်ပါ။
ရွှေ တံခါးတွေ ဖွင့်ရပါဦးမည်။ ငွေတံခါး တွေ ဖွင့်ရပါဦးမည်။
“ထန်းလျက်တစ်ကိုက် ထန်း တစ်ကိုက်…ပညာရွှေအိုး အောက်ပိုးကျိုက်…လိုက်﻿"
လိုက် လိုက်ကြတာ တရုန်းရုန်း…ပညာဖုန်တွေ တလုံးလုံး…”။
၂၀၁၂ ခုနှစ်﻿ Independent journal
Posted by Alex Aung at 8:55 AM No comments:
ပုလဲကြိုက်သူများအတွက် ပုလဲအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Credit to မြန်မာ့ရေပြင်မှ ပုလဲများ(စာရေးသူ - ခင်အောင်သန်း၊ မြန်မာ့ပုလဲ၊ မြိတ်မြို့
Posted by Alex Aung at 5:43 PM No comments:
သွေးဖိအားနည်းတယ်ဆိုတာမှာ နှိုင်းပြောရတာမျိုးဖြစ်တယ်။ အရင်ကထက် နည်းတာလဲကျတာဘဲ။ ပုံမှန်ထက် နည်းတာလဲ ကျတာဘဲ။ ဆေးပညာမှာ ဘယ်ဂဏန်းကို ကျတယ်ပြောမလဲလို့ အတိအကျမရှိပါ။ အထက်သွေးဖိအား ၁ဝဝ အောက်ကျရင် နည်းတယ်လို့ပြောရင် မမှားပါ။ သွေးဖိအားနည်းစေတဲ့အကြောင်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဝမ်းပျက်ရင်။ အန်ရင်၊ အလုပ်ပင်ပန်းရင်လဲဖြစ်တယ်။ သွေးထွက်-သွေးဆင်း များရင်လဲဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စေတာကို ကုရမယ်။ နားရမယ်။ မူးမိုက်သွားရင် ချက်ချင်းလှဲအိပ်ရမယ်။ လိုအပ်ရင် Dextrose, RL drip သွင်းရမယ်။ သွေးကြောင့်ဆိုရင် သွေးသွင်းရမယ်။ ကျန်တာအတွက် ORS ဓါတ်ဆားရည် သောက်ရမယ်။ အမြဲလိုနည်းနေရင် ဆေးစစ်ရမယ်။
သွေးဖိအားနည်းတာကို Hypotension လို့လဲခေါ်တယ်။ နှလုံးကနေ လူ့တကိုယ်လုံးအနှံ့ရောက်အောင် ဖိအားသုံးပြီး ညှစ်ထုတ်နေရတာမှာ ဖိအားနည်းရေင် သွေးသန့်တွေ လုံလောက်အောင် မရောက်စေနိုင်ဘူး။ သွေးဖိအား နည်းနေယုံ သက်သက်ဆိုရင် ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ခေါင်းထဲပေါ့နေမယ်၊ ခေါင်းမူးမယ်၊ သတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးကုရပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကလဲ လှဲနေရာကနေ ထတာ၊ ရပ်တာလုပ်မှ ဖြစ်တတ်တယ်။
သွေးတိုးရောဂါမှာလို အထက်ဂဏန်း-အောက်ဂဏန်းကိုကြည့်ပြီး သွေးဖိအားနည်းတယ်ပြောတာထက် ဘာတွေ ခံစားနေရသလဲကို ကြည့်ရတယ်။ BP 90/50 ရှိပြီး ဘာမှမခံစားရတာလဲရှိတယ်။ ဆေးကုစရာမလိုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် သွေးဖိအားနည်းတတ်တယ်။ 100/60 သာရှိပေမဲ့ ပုံမှန်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ အားကစားသမားတွေမှာ သူများထက် နည်းနေတယ်။ သွေးဖိအားနည်းနေသူမျိုးဟာ ရေရှည်ကြည့်ရင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရေဓါတ် နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝမ်းလျှောတာ၊ အန်တာ၊ လှုပ်ရှာမှုများတာ? ချွေးထွက်များတာ၊ ရာသီဥတုပူပြင်းတာ တွေကနေ ဖြစ်တယ်။
• သွေးယိုတာရှိရင် သွေးထိတ်အောင်လုပ်ပါ။ သွေးသွင်းပါ။
• နှလုံးခုန်နှေးလွန်းနေရင်၊ နှလုံပိတ်ရောဂါဖြစ်နေရင် Pacemaker တပ်ပေးမယ်။
Credit: Dr. တင့်ဆွေရဲ့ Facebook Page
ဒူးရင်းသီးရာသီ မကုန်ခင် မြန်မြန်လေး လုပ်စားကြည့်ရအောင်။
သွေးတိုးရှိသူများ နှင့် သွေးတိုးတက်သူများ သတိဖြင့် စားပါနော်။ အရမ်းစားကောင်းတော့ အများကြီး စားမိမှာစိုးလို့ ပါ။
ဒူးရင်းသီး ခေါင်းအုံးမုန့် ၆ခုစာ အချိုးအစားပါ။
Whipping Cream အနည်းငယ်
ဂျုံမှုန့်၁ခွက်စာ (၁၃၀ ဂရမ်)
ကြက်ဥအကြီး ၁လုံး (သေးလျှင် ၂လုံးထည့်ပါ)
နွားနို့၂၀၀မီလီလီတာ
၁) အပြင်ခွံပြုလုပ်ဖို့ မုန့်နှစ်ရည်အတွက် ပထမဆုံး ကြက်ဥအနှစ်အကာ နှင့် သကြား အနည်းငယ်ရောပြီး ခေါက်ပါ။
၂) ဂျုံမှုန့် ကို ဇကာ ချပြီး ကြက်ဥခေါက်ထားတဲ့ကို ရောပြီး မွှေပါ။ နွားနို့ကို ဖြေးဖြေးချင်းလောင်းထည့်ပြီး မွှေပါ။
၃) ထောပါတ်ကို ထည့်ပြီး အသာမွှေပါ။ မုန့် နှစ်ရည်ကို ၁၀မိနစ်ခန့်အဖုံးအုပ်ပြီး ထားလိုက်ပါ။
၄) ဒူးရင်းသီးကို ခွဲပြီး အမွှာတွေကို ပန်းကန် သပ်သပ်ဖြင့် ထည့်ပါ။ အသားနွှင်ပြီး သကြား အနည်းငယ်နှင့် အသာ ချေထားပါ။ ပြီးလျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားပါ။
၅) အပြင်ခွံပြုလုပ်ပါတော့မယ်။ မကပ်တဲ့အိုးကို မီးအနေတော် အပူပေးထားပါ။ ပြီးလျှင် မုန့်နှစ်ရည် ၁ဇွန်းစာ လောင်းထည့်ပါ။
၆) အပေါ်ယံ ကျက်သွားလျှင် ဆယ်ယူပြီး အအေးခံပါ။ (ခဏလေးဖြင့် အကျက်မြန်ပါတယ်။ နောက်တဖက် ပြောင်းစရာ မလိုပါ။) တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မကပ်အောင် မုန့်ချပ်တွေ ကြားထဲမှာ cooking paper တွေ ခံထားပါ။
၇) အေးသွားလျှင် ဗန်း(သို့ ) ပန်းကန်ပြားကြီးကြီးထဲ မုန့် တစ်ချပ်ကို အရင် ခင်းပါ။ လှတဲ့ ဖက်ကို အပြင်ဖက် ထားပါ။ အအေးခံထားသော ဒူးရင်းသီးအနှစ်ကို လိုသလောက် ခပ်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Whipping Cream အနည်းငယ် တင်ပါ။ အစလေးတွေကို ခေါင်းအုံးပုံစံ စုပြီး ခေါက်ပါ။
၈) ပန်းကန်ပြားထဲ (သို့ ) ဗူးထဲ အသာစီ ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲ နာရီဝက်ခန့်ထည့်ပြီး အအေးခံပါ။
ချိုချိုအေးအေး ဒူးရင်းသီး ခေါင်းအုံးမုန့်လေးကို ဒီအတိုင်းပဲ စားစား၊ ကော်ဖီပူပူလေးနှင့် တွဲစားစား အလွန် လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်။
Credit: Kae Kae´FoodPalace
Posted by Alex Aung at 9:19 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 11:17 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 2:06 PM No comments:
Labels: Beauty Tips, Health, ဗဟုသုတ
လူ့စိတ်ကို စတင် လေ့လာရာခဲ့တဲ့ အစအဦးမှာတော့ လူကို လိင်ခွဲခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး..။ တဖြေးဖြေးတိုးတက်လာတဲ့ စိတ်ပညာမှာတော့ လူတဦးရဲ့ ကျား မ လိင်ကွဲပြားမှုဟာ သူ့စိတ်ကို လွှမ်းမိုးလှုံ့ဆော်နိုင်တယ် အချက်ကို လက်ခံလာကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လိင်ကွဲပြားမှုတင်မကပဲ သူ့ရဲ့ အတ်ိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နှစ်ခု ပေါင်းစပ်မှု အခြေအနေ၊ အသက်မွေးကျောင်း အလုပ်အကိုင်၊ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ စတာတွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားလာကြပါတယ်။
အဲလို့လေ့လာခဲ့ရာက လူတဦးချင်းဆီမှာ ဉာဏ်စွဲလို့ခေါ်တဲ့ တခုခုကို စွဲလမ်းတဲ့ စိတ်ဟာ အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်တယ် ဆိုတာကို သိလာပါတယ်..။ ဉာဏ်စွဲကို လိင်စိတ်က လှုံ့ဆော်ရာမှ
ဖြစ်လာရတဲ့ စိတ်ရောဂါတွေဟာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းလှသမို့ ဒါတွေကို လေ့လာရင်း စိတ်ပညာရှင်တွေကိ်ုယ်တိုင် ရူးချင်ချင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့..။
ဖရိုက်ကတော့ လူတွေရဲ့ လိင်စိတ်ကို အဓိကထားဗဟိုပြုပြီး လေ့လာကုသပါတယ်..။ ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ အ်ိမ်ထောင်ရေးနောက်ကွယ်က
လိင်စိတ်တွေကို အံ့သြရှုမောဖွယ်ကောင်းအောင် ဖော်ထုတ်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ သူနဲ့ခေတ်ပြိုင် စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ အကြီးအကျယ် ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ပေါ့..။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာသမျှသော စိတ်ဝေဒနာ အများစုဟာ ကလေးငယ်အရွယ်မှအစ နောက်ဆုံး လိင်စိတ်မှာ အခြေခံပြီး စိတ်ဝေဒနာနဲ့လိင်စိတ်ဟာ ဒွေးရောယှက်တင် ခွဲမရနိုင်ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဖရိုက်ကို အသိအမှတ်မပြုလို့ မရတော့ပါဘူး..။
အသက်ငါးနှစ်မှ ဆယ့်နှစ်နှစ် ထိ လူမမယ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေဟာ ကစားခုန်စားခြင်းလို ကိ်ုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် အဲ့ဒီအချိန်မှာ
လိင်စိတ် မပေါ်လွင်ပဲ ငုပ်နေတတ်ပေမယ့် ဆယ့်နှစ်နှစ် အကျော်ကစ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အထိမှာတော့ လိင်စိတ်ရဲ့ အပြင်းအထန်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်
နွားသိုးကြိုးပြတ်သလို မြင်သမျှကို စိတ်ကြွတတ်ပါတယ်တဲ့..။ အဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ လိင်ကွဲတွေနဲ့ မနီးစပ်ရင် လိင်တူနဲ့လည်း အတူ သောင်းကျန်းတတ်ကြပါသတဲ့။ နောက်ဆုံး ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုလည်း ကိ်ုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စွဲလမ်းတပ်မက်ခြင်း
လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ကိ်ုယ်ခန္ဓာကိ်ုယ်ကို ကိုယ်လုံတီးအတိုင်း မက်မက်မောမော ကြည့်ခြင်း၊ အခြားသူများကို ပြခြင်း၊ အခြားလူများရဲ့ ခန္ဓာကိ်ုယ်ကိုလည်း အလားတူကြည့်လိုခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လိင်ကွဲတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိ်ုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ချောင်းမြောင်းကြည့်လိုခြင်း (ခုတော့ တကူးတက ချောင်းကြည့်စရာမလိုတော့ဘူး....ဖုန်းတလုံးရှိရင်ရပြီ)
ဒါဟာ လူငယ်သဘာဝအရ ဖြစ်မြဲဓမ္မာတာမို့ လူငယ်တွေရဲ့ လိင်စိတ်ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ စနစ်တကျ မသင်ပေး အသိမပေးပဲ အတင်းအဓမ္မနည်းနဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လောင်းရိပ်ကျတဲ့ အပင်ငယ်လို ပုံမှန်မဖွံ့ဖြိုးတော့ပဲ လိင်စိတ်ဖော်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ရာမှ တနွယ်ငင် တစင်ပါဆိုသလို ဘဝတလျောက်လုံး အခြားသော လူမှုရေးဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့..။
လိင်စိတ်စွဲလမ်းပြင်းထန်လာတဲ့ အဆိုးဆုံးအဆင့်ကို (A/Edepus Complex) လို့ ဖရိုက်က နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်..။ အဒ်ပတ်စ် ဆိုတာ ခေါမခေတ်မှာ အမေကို စွဲလမ်းစိတ်ကြောင့် ဖခင်ကိုသတ်ပြီး မယ်တော်ကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သူပါတဲ့..။ ဒီလို (A/Edepus)စိတ်နဲ့ သိပ်မကွဲတာ နောက်တခုက သွေးနီးချင်း လိင်တပ်မက်တဲ့စိတ်ပါပဲ။ ဥပမာ..အာရိယန်မျိုးတို့ နဲ့ သာကီမျိုးတို့ ဆိုတာတွေဟာ အဲ့လို စိတ်အတွက် အထောက်အထားတွေဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ သူ့မှာရှိတာ ကိ်ုယ့်မှာ မရှိလေခြင်း မပါလေခြင်း ဆိုပြီး ဆန်ကျင့်ဘက်လိင်ကို စောင်းမြောင်းပြောဆို ငြိုငြင်သလို လုပ်ပြတတ်တာဟာလည်း လူ့ခန္ဓာကိ်ုယ်ဖြင့် လိင်စိတ်ကို ဆွဲငင်ဖောက်ပြန်ခြင်း တမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဖရိုက်က ဆိုပါတယ်..။ ဒီလိုရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လူ့စိတ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံသော်လည်း ဒါကိုပင် စွဲလမ်းတပ်မက်နေခြင်း၊ သေချာပြုလုပ်ပြီးမှ ဖျက်ဆီးတတ်ခြင်းတို့လို အစွန်းနှစ်ဖက် ဖြစ်နေတတ်မျိုးတွေ ရှိပါတယ်တဲ့...။
လိင်စိတ်စွမ်းအား( Sex Urge)နှင့် ဗီဇစွမ်းအား (Ego Urge)တို့ကြောင့် လူစိတ်ကို အဲ့လိုအစွန်းနှစ်ဖက် ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့...။ကိ်ုယ့်ကိ်ုယ်ကိ်ုယ် မှန်ထဲကြည့်ပြီး ကျေနပ်သာယာနေချိန်မှာ လိင်စွမ်းအားက အနိုင်ယူနေချိန်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတခုကို အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်လို့ ကျေနပ်နေမိတာကတော့ဗီဇစွမ်းအားပါတဲ့..။ ဖရိုက်ရဲ့ မျက်မှန်နောက်က ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်ရင် အားလုံးသော လူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်မှုတွေဟာ လိင်စိတ်မှာအခြေခံပြီး လိင်စိတ်ရဲ့ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ...။
ဒီနေရာမှာ ဖရိုက်ရဲ့လူနာ နှစ်ဦးအကြောင်း ရေးပြချင်တယ်..။ ဖရိုက်ရဲ့လူနာတဦးဖြစ်တဲ့ ပေါ်လက်ခ် လို့ခေါ်တဲ့ မိန်ကလေးမှာ ထူးဆန်းတဲ့
စိတ်အစွဲအလမ်းတခုရှိပါတယ်တဲ့..။အဲ့တာကတော့ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်းမှာ လိုတာထက်ပိုပြီး အိပ်ယာခင်းတွေ ခေါင်းအုံးတွေကို ရိုက်ခါတတ်ပြီး
အခန်းထဲက နာရီတွေကိုလည်း အသံကိုနားမခံလို့ အားလုံးရပ်ထားလိုက်ပါတယ်..။ ခေါင်းအုံးအပိုတလုံးကိုလည်း ကုတင်ပေါ်မှာ ခပ်စောင်းစောင်း အနေအထားနဲ့ ထားပါတယ်...။ ဖရိုက်ဟာ ဒီမိန်းကလေးကို လပေါင်းအတော်ကြာ အချိန်ယူပြီး
လေ့လာတဲ့အခါမှာ 'အပျိုဘဝကို အလွန်အကျွံတပ်မက်ခြင်း' ဉာဏ်ကြောင့် ဆိုတာကို သိလာခဲ့ရပါတယ်..။ ဒီမိန်းကလေး အပျိုဝင်စအရွယ် သူ့အိမ်က
လူကြီးတွေက သူ့အစ်မကို မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ကိစ္စမှာ ဆောင်ရန် ရှောင်တွေ မှာကြားတော့ အခမ်းအနားမှာ ပန်ကန်ခွက်ယောက်တွေကို မကွဲအောင် သေချာဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျကွဲခဲ့ရင် မကောင်းတဲ့ အတိတ်နမိတ်တခုဖြစ်ကြောင်း၊ ထိခိုက်ရှမိပြီး သွေးထွက်ရင် ပိုဆိုးကြောင်း စတာတွေကို ကြားခဲ့ရပါတယ်..။ ဒီစကားတွေဟာ သူ့ရဲ့စိတ်မှာ စွဲထင်နေရာက သူ့အခန်းထဲမှာ ကျကွဲနိုင်တဲ့ အရာတွေကို အောက်မှာချထားတာမျိုး၊ အိပ်ယာခင်းသေချာ ခါတာမျိုးဖြစ်ပြီး
ကျကွဲသံကို ကြောက်ရင်း ဘာအသံမှ မကြားချင်တော့ပဲ နာရီစက်တွေပါရပ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။ ခေါင်းအုံးကို ထားတာလည်း ယောက်ျားနဲ့ အတူမနေချင်လို့ စည်းခြားထားတဲ့ သဘောပါတဲ့..။ ဒီလိုနဲ့ရောဂါရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ဖော်ထုတ်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒုတိယတဦးကတော့ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသမီး အကြောင်းပါ..။ ဒီအမျိုးသမီးဟာ အိမ်မှာမရှိ ရှိအလုပ်တွေကို တနေကုန် မနေမနား
လုပ်နေတတ်ပြီး အိမ်ဖော် မိန်းကလေးတွေကိုလည်း အသေးအဖွဲ့လေးတွေကို မနားတမ်း ခိုင်းနေတတ်ပါတယ်တဲ့..။ လုပ်နေ ခိုင်းနေသမျှကိုလည်း ဘယ်တော့မှ စိတ်တိုင်းကျခြင်းမရှိပါဘူး..။ ဒီလိုနဲ့ ဖရိုက်ဆီရောက်လာရာ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လိုလုပ်တာလဲ မေးကြည့်တော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး တဲ့..။ ဒါနဲ့ ဖရိုက်ဟာ သူစိတ်အခြေအနေသိနိ်ုင်ဖို့ သူ့အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရာ သူဟာ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်တုန်းက အသက်ကြီးကြီး အဘိုးအိုတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာသိရပါတယ်..။ အဘိုးကြီးဟာ အသက်အရွယ်ကြောင့်
မင်္ဂလာဦးညမှာ လိင်ကိစ္စကို မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့...။ ဒါနဲ့ပဲ အမျိုးသမီးဟာ သူ့အဘိုးကြီး မစွမ်းတာကို လူတွေသိကုန်မှာစိုးလို့ အိပ်ယာခင်းကို ဆေးနီတွေသုတ်လိမ်းခဲ့ပါတယ်...။
( တရုတ်ပြည်မှာလည်း ဒီလိုညမျိုးမှာ အိပ်ယာခင်းပေါ်သွေးမကျရင် အပျိုမစစ်တဲ့ အတွက် အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှိခဲ့ပါတယ်.) ဒါကို သူဟာ စိတ်စွဲနေပြီး ပေကျံနေတယ်လို့ ထင်တဲ့ အရာတွေကို မနားတမ်း လိုက်သုတ်နေခြင်းဖြစ်သလို တဖက်မှာလည်း အစွန်းအထင်းကွက်ကို လူတွေ တွေ့စေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်လည်း အိမ်ဖော်တွေကို အစွမ်းအထင်းအသေးအဖွဲလေးတွေ လိုက်ပြပြီး သုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါသတဲ့..။
နောက်ထပ် အဖြစ်တခုကတောလ ကိ်ုယ့်စိတ်ကိ်ုယ်လှည့်စားမှု ဖြစ်နေသော အမျိုးသမီး တဦးအကြောင်းပါ..။ အဲ့ဒီလူနာကို ဖရိုက်ဆီခေါ်လာခဲ့သူက အရွယ်ငယ်ငယ်စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့သားမက် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ..။ အမျိုးသမီးကြီးဟာ အိမ်ထောင်သက် နှစ် ၃၀ ကြာအောင် လင်ယောက်ျားနဲ့ ဘာပြဿနာကြီးကြီးမားမားမှ မဖြစ်ပဲနေလာခဲ့ပြီး သားနဲ့ သမီးနှစ်ဦးစလုံးဟာ
လည်း အိမ်ထောင်ရှင်တွေဖြစ်နေပါပြီ..။ ပြဿနာက ဒီကိုမလာခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တလလောက်က ပစ်စာတစောင် ရောက်ရှိလာရာမှ စ ပါသတဲ့..။
ပစ်စာက သူ့လင် မယားငယ်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီနေ့ကစပြီး အမျိုးသမီးကြီးဟာ တဆွေလုံး တမျိုးလုံးနဲ့ မတည့်တော့ပဲ သူအိမ်လာသမျှ လူတွေကို ပြဿနာရှာပါတော့တယ်..။
ဒါနဲ့ စုံစမ်းကြည့်တော့ အမျိုးသမီးကြီးဟာ ကိုယ့်အိမ်ဖော်တွေနဲ့ အရမ်းအရောဝင်ပြီး အတင်းအဖျင်းပြောတာ ဝါသနာထုံသတဲ့..။ အိမ်ကို မကြာမကြာ ဝင်ထွက်နေတဲ့ သူ့ယောက်ျားရဲ့ မိတ်ဆွေအဘိုးကြီး မယားငယ်ထားတဲ့ အကြောင်းကို နေ့တိုင်းနီးပါး ပြောပြီး သူအိမ်ဖော်တွေနဲ့ ရယ်ပွဲဖွဲ့ရင်း ကိ်ုယ့်အ်ိမ်က လူကြီးလည်း သူ့လိုဆို ကိုယ်တော့ ဒုက္ခပဲ ဆိုပြီး ညည်းလေ့ရှိပါတယ်..။ အဲ့လိုပြောနေချိန်မှာပဲ ပစ်စာရောက်လာတာပါ..။ အမှန်တော့ အိမ်ဖော်တဦးကပဲ သူနဲ့မတည့်တဲ့ နောက်အိမ်ဖော်တဦးကို သူ့အိမ်ရှင်နဲ့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲပြီး ရေးခဲ့တဲ့ပစ်စာပါ..။ နောက်တော့ အဖြစ်မှန်ကိုသိပြီး
အလုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်..။ မဟုတ်မမှန်ဘူးဆိုတာ သိရပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးကြီးဟာ ဒါကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ တွေးနေရင်း ခုလို စိတ်ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်လာရတာပါ...။
ဖရိုက်ရဲ့နှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးမေးမြန်းမှု အပြီးမှာတော့ အဖြေက ရှင်းလင်းစွာ ထွက်လာပါတယ်...။ တကယ်တော့ သူ့ရောဂါ ရဲ့မူရင်ဟာ အဘိုးကြီးကို မင်္ကာလို့ ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပဲ သူကိ်ုယ်တိုင်က ငယ်ရွယ်နုပျိတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကို
နှစ်သက်စွဲလမ်းမိရာက စ ပါ သတဲ့လေ..။ သူ့စွဲလမ်းမိတဲ့ သူငယ်ဟာလည်း တခြားလူ မဟုတ်ပဲ သူ့သားမက် စစ်ဗိုလ်ကိုလူချောကိုပါတဲ့...။ သူ့သားမက်ကို ကျွေးမွေးလိုစိတ်၊ ပြုစုလိုစိတ်တွေ တဖြေးဖြေးများလာရာက ငါ့လူကြီး ငယ်အနှောင်းထားရင်တော့ ငါလည်းထားရမှာပဲ ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်ပြီး
ကြာလာတော့ သူ့ရဲ့အုံပုန်းစိတ်ဒဏ်ကို တခြာ လူတွေကို အပစ်ဖို့လွဲချပြီး ပြဿနာရှာခြင်းဖြစ်ပါသတဲ့...။
လူတိုင်းဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် အတွေးတွေနဲ့ နွေလယ်အိပ်မက် မက်နေသူတွေလို့ ဖရိုက်က ဆိုပါတယ်..။ ချုပ်တီးထားတဲ့ ဆန္ဒတွေ၊
တောင့်တချက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေဟာ လူကို ဒုက္ခပေးဖို့ရာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလို တနေ့ကုန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
မပြောရဲ့ မဆိုရဲ မပြောဖြစ် မဆိုဖြစ်ခဲ့ပဲ ထိန်းချုပ်ခဲ့ရတာတွေကို ညဘက် တယောက်ထဲကိုယ်ကိုင် အချိန်ကျမှ လွတ်လပ်ရေးရလာပြီး အိပ်မက် အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ ယူဆပါတယ်..။လိင်မှုအိပ်မက်တွေဟာလည်း လိင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်လွန်းမှုကြောင့်ပါတဲ့..။
အိပ်မက်ဆိုတာဟာ သိရက်ဖြစ်စေ မသိပဲဖြစ်စေ စိတ်ထဲစွဲထင်မိတာကို ရောင်ပြန်ခြင်း တမျိုးဖြစ်ပြီး စွဲထင်တဲ့ အကြောင်းအရာ သေးသေး ကြီးကြီး
ထင်ရှား မထင်ရှား စွဲထင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာ မှတ်ဉာဏ်ကို ပြေးရိုက်ကာ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..။
ကိ်ုယ့်စိတ်ဆန္ဒကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရဲရဲတင်းတင်း မထုတ်ဖော်ကြပဲ ကြိတ်ပြီး မုန်းကြ ချစ်ကြ ရက်စက်ကြ မနာလိုကြတဲ့ မနုသီဟလိုစိတ်နှစ်ခွဖြစ်တာတွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ ဖုံးမရဖိမရကြွလာ ကြပါတယ်..။ ယောက္ခမလုပ်သူနဲ့ ဘုရားဖူးအတူထွက်ရကြောင်း အိပ်မက်ထဲ မြင်မက်မိသူ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သူမဟာ ယောက္ခမနဲ့ အတူ မနေချင်တော့ပဲ အိမ်ပြောင်းပြေးချင် စိတ်များနေကြောင်း ဖရိုက်က ကောက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်...။
နောက်ပြီး တချို့ကိစ္စတွေမှာ တစ်ဦးတည်းရှိစဉ်မှာ မလုပ်ဝံ့၍သော်လည်းကောင်း၊ တခြားအကြောင်းခုကြောင့်သော်လည်းကောင်း မလုပ်ပဲနေတတ်ပေမယ့် လူအများနဲ့ရောနှောပြီး လူအုပ်ချီလျက် လုပ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ဘာမသိ ညာမသိ ဝင်လုပ်တတ်ပါကြပါတယ်..။ ဥပမာ..အားနွဲ့သူကို ဝိုင်းပြီး မတရားပြုကျင့်တာမျိုး၊ လူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးပြီး မတရားဝိုင်းဝန်း နှိပ်စက်ကြတာမျိုး၊ ဈေးဆိုင်များကို ဝိုင်းပြီးဖျက်ကြတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံးပြောရရင် လိင်စိတ်သွေးဆာမှုဟာ သင်္ကြန်မှာရေးကစားရင်း တဖက်သား နာကျင်သွား ထိခိုက်သွားစေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေပက်တဲ့ ကိစ္စလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလိုလုပ်နေတတ်တဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ရင်
၂၁ ရာစု ယဉ်ကျေးမှုလူသားမှ ဟုတ်ပါလေစ သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်က အမဲလိုက်ရင်း အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြတဲ့ လူရိုင်းတွေများလား လို့
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သက်ရှိသတ္တဝါတွေဟာ အဖိုဖြစ်လမ်းနည်းတာကြောင့် အမ စစ်စစ်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မှာ အဖို သဘာဝအနည်းငယ်ရှိတတ်သလို အဖိုစစ်စစ်ဖြစ်သူတွေမှာလည်း ထို့နည်းတူ အမ သဘာဝ အကြွင်းအကျန်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်တဲ့...။ လူရဲ့ စအိုဝရှိ အရေးပြားနဲ့ စအိုပြွန်ဝ အကြောကြွက်သား ဆုံရာနေရာဟာ သာမန်တန်ဆာ ကဲ့သို့ လိင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ခံစားနိုင်ပါတယ်...။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဒါကို လစ်လျူရှုပြီး ဖျောက်ဖျက်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အချို့သူတွေဟာ အဲ့ဒီနေရာရဲ့ ကျေးကျွန် သဖွယ် လူမသိသူမသိ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့..။ ဖိုဖြစ်ဖြစ် မ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကို ယေဘူယျသဘောပြောရရင် သူတို့ဟာ ခေါင်းမာတတ်၊ အမြင်ကတ်လောက်အောင် ကပ်စေးနည်းတတ်၊
တခါတရံ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စတွေကို ပုံကြီးချဲ့တတ်၊ ကြီးကျယ်တတ်၊ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီအဝတ်အစားနဲ့ ဆံပင်ကို မလိုအပ်ပဲ ခဏခဏပြင်ဆင်တတ်၊ လက်တွေ ခြေတွေကို ခဏခဏရေဆေးတတ် ကြပါတယ်တဲ့....။
လူမှာ လိင်စိတ်တဏှာကို အရင်းပြုလျက် ထကြွလှုပ်ရှားပြီး တည်မြဲစွာနေလိုခြင်းနဲ့ ဘဝကို လုံးပါးပါးပြီး အဆုံးသတ်ပစ်ချင်လိုခြင်း နှစ်ခုကြားမှာ လွန်ဆွဲနေတတ်တာပင်လျှင် လူ့ဘဝ၏ ထူးခြားမှု တခုဟု ဖရိုက်က ဆိုပါတယ်..။ ဒီလို မတူတာနှစ်ခု မမျှတပဲ တဖက်ဖက်ကို အလေးပေးလွန်းလျှင် လူ့ဘဝ ပျက်ရာပျက်ကြောင်း အခြေခံပင်ဖြစ်လေပါတော့တယ်...။
လူရဲ့ လိင်ခံစားနိုင်မှုအသိဟာ အရွယ်ရောက်စဉ်မှစ၍ ဇရာလွန် အိုမင်းတွင်းဆုံးကျချိန်ထိ ရှိနေတတ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် လိင်စိတ်ခံစားနိုင်မှု အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ လိင်အင်္ဂါများ၊ ရင်သားများ၊
တင်ပဆုံ၊ နားရွက် ၊ပါး၊ ပါးစပ်စတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပေမယ့် တချို့လူများအဖို့တော့ အဲ့လို အစိတ်အပိုင်းတွေသာမကပဲ တကိ်ုယ်လုံး မည်သည့်နေရာကိုမဆို ပွတ်သပ်ထိပါးမိတာနဲ့ လိင်စိတ် တက်ကြွတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်တဲ့..။
ဒီလို သာမန်ထက်လွန်ကဲပြီး လိင်စိတ်စွဲငြိ နေသူတွေဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို လိင်ကွဲသူ မြင်အောင်ပြခြင်း၊ လိင်ကွဲသူတွေနဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ်နေထိ်ုင်ခြင်း၊ မတော်တဆလိုလိုနဲ့
တမင်တကာ ခန္ဓာကိ်ုယ်အစိတ်အပိုင်းခြင်း ထိစပ်အောင်ပြုခြင်း (ဥပမာ..လိုင်းကားပေါ်တွင် မဖွယ်မရာပြုလုပ်တတ်ကြသူများကိုကြည့်ပါ) တို့ ပြုလုပ်ပြီး လိင်စိတ်သာယာမှုကို ခံစားကြပါတယ်..။
ထပ်ပြောရရင် ကိ်ုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ လိင်ကိစ္စကို အခြားသူတွေမြင်အောင်ပြခြင်း ( ဒီနေ့ ခေတ်မှာတော့ ဗီဒီယို ဖိုင်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြခြင်းပေါ့) ၊ အားပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ မိန်ရေရှက်ရေ ပြန်ပြောပြခြင်းတွေဟာလည်း လိင်စိတ်လွန်မှု တမျိုးပါပဲတဲ့..။ ဒါဟာ အရှက်မရှိခြင်း ဆန္ဒရမက်ကြီးခြင်း မဟုတ်ပဲ
ဒီလိုလုပ်လိုက်မှ သူတို့ရဲ့ လိင်စိတ်ပြည့်ဝမှု ရှိသွားတာမျိုးပါတဲ့..။ ဒါမျိုးဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအရွယ်မှာ တစုံတရာသော စိတ်အခြေခံထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်လာရတာမျိုးပါတဲ့..။အင်္ဂလိပ်လိုတော့ (Exhibitionism) လို့ခေါ်တဲ့ ကိ်ုယ့်ရဲ့ မဖွယ်မရာကို လူမြင်အောင်ပြတတ်သော လိင်စိတ်ဝေဒနာ တမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။
မ ဆိုလျှင် ပျိုပျို အိုအို မရှောင်ပဲ အလွန်းအမင်း စွဲလမ်းတတ်တဲ့ လိင်စိတ်လွန်ကဲ တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်...။ ခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင် ဝါးလုံးတင်လာတဲ့ ကား ရှေ့က ဖြတ်သွားရင်တောင် စိတ်ကြွတတ်မျိုး လို့ပြောရမလားပဲ...။ ဒါမျိုးကတော့ တကယ့်ကို လိင်စိတ်လွန်ကျူးပြီး တဏှာရူးထနေတာမျိုးလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်..။ အဲ့လိုလူမျိုးဟာ အပြာစာအုပ်တွေ ရုပ်ရှင်တွေ မဖတ်ရ မကြည့်ရလည်း အမြဲတမ်း စိတ်ရိုင်းဝင်နေတတ်ပြီး
ကုစားရတာအလွန်ခက်တဲ့ (Nymphomania) လို့ခေါ်တဲ့ အပြင်းစားလိင်စိတ်ဝေဒနာရှင်
တွေဖြစ်ပါသတဲ့..။ အိမ်ထောင်ရှိပေမယ့်လည်း မယားတွေမှိုလိုပေါက်ပြီး မယားငယ်သက်စေ့ ယူထားသူတွေဟာလည်း အဲ့လိုရောဂါသည် စာရင်းပေါက်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။
သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ မကြာခဏပါလေ့ရှိသလို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ
လူမမယ်ကလေးအရွယ်အပေါ် ကာမကျူးလွန်တတ်မျိုးဟာလည်း ဖောက်ပြန်တဲ့ လိင်စိတ်တမျိုးပါပဲ..။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မြေးအဖိုး မြေးအဖွား အရွယ်မို့ ဘာမှ မဖြစ်တန်လောက်ဘူးလို့ထင်ကြပေမယ့် တကယ်ကျူးလွန်သူတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် တချို့ဆို မြေးတင်မက မြစ်ပါရှိနေတာမျိုး တွေ့ရမှာပါ..။ ဒီကိစ္စမှာတော့ ပင်ကိ်ုယ်ရာဂသောင်းကျန်းမှု သက်သက်လို့ မဆိုနိုင်သလို
အမျိုးသားမို့ဖြစ်တယ် အမျိုးသမီးမို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်း ခွဲခြားလို့ မရနိုင်ပါဘူးတဲ့..။ အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ လိင်သဘာဝအရ ဒါမျိုးအဖြစ်နည်းပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ ဖွဲတဆုပ်သယ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ထိ ဇွဲမလျော့ တတ်ကြတာမို့ ဒါမျိုးအဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်...။ ဒီနေရာတော့ ကာယကံမြောက် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတာတင်မကပဲ တချို့သော လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများရဲ့ ကလေးငယ်များ အပေါ်လိုတာပိုပြီး အချစ်သည်းပြီး ဖက်ရမ်းနမ်းရှုံ့တတ်တာမျိုး၊ ကလေးငယ်ကို ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး
ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်နေတာမျိုး၊ ညအချိန် ကလေးငယ်တွေနဲ့အတူ ဖက်ခွပြီး အိပ်တာမျိုးတွေဟာ ဒီလူပျိုကြီး ဒီအပျိုကြီး ကလေးအရမ်းချစ်တတ်တာပဲ လို့ ဆိုကြပေမယ့် ဒါဟာ ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်လိင်စိတ်တပ်မက်ခြင်း (Paedophilia) စိတ်ရောဂါ အမျိုးအစားဖြစ်လို့ အပေါ်က အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေနဲ့ တတန်းစားထဲပါပဲတဲ့...။
နှစ်နှစ်အရွယ်လောက်မှ စပြီး ကလေးငယ်တွေဟာ မည်သူမှ သင်ကြားခြင်းမရှိ မည့်သည်အပြုအမှုကိုမှ အတုယူခြင်းလည်း မဟုတ်ပဲ တယောက်ထဲရှိနေချိန်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို လက်နဲ့ဖြစ်စေ တခြားအရာတခုနဲ့ဖြစ်စေ ထိတွေ့ကိုင်ကစားနေတတ်ကြပါတယ်..။ ဒါဟာ လူကြီးတွေလို လိင်ကွဲအပေါ်တပ်မက်တဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ သူတို့ကိ်ုယ်တိုင် အဖိုဖြစ်လိုက် အမဖြစ်လိုက်နဲ့ စိတ်ကူးလုပ်ဆောင်နေတတ်တာမျိုးပါတဲ့..။ ဒါမျိုးလုပ်တာကိုလည်း ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိကြပါဘူး..။ လူကြီးတွေက ပြောဆိုရိုက်ပုတ် ဆုံးမသည့်တိုင် လစ်ရင်လစ်သလို လုပ်မြဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ်.။ (Polymorphous Perverse)လို့ ခေါ်ပါသတဲ့...။အဲ့လိုလုပ်နေရာကနေ တဖြေးတဖြေး အဆင့်ပြီးတဆင့် ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့..။ ဒီကိစ္စကိုလူကြီးများအနေနဲ့ အတင်းအဓမ္မလုပ်ရင် ဒီကလေးရဲ့ လူငယ်ဘဝမှာ လိင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတခု ထင်သွားနိုင်ပါတယ်..။ အလွန်းနူးညံ့စွာ ကိုင်တွယ်ပြီး တခြားအာရုံလွဲစရာ တခုခုနဲ့ (ဥပမာ..အားကစား၊ ပုံဆွဲခြင်း)
လွဲပြောင်းပေးလိုက်ရင် အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ သူကိ်ုယ်တိုင်မေ့သွားပါလိမ့်မယ်....။
ကြောက်စရာတွေ့ရပါလျက် ထွက်မပြေးတတ်၊ လွမ်းစရာတွေ့ရပါလျက် မလွမ်းတတ် မငိုတတ်
တာဟာ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ စိတ်ဓါတ်မာကြောတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါမျိုးဟာ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို နားမလည်သူ မခံစားတတ်သူ တွေ့မို့ စိတ်ရောမာကြောခြင်းရောဂါတမျိုးပါပဲတဲ့..။ လူဟာ စက်ရုပ်မဟုတ်တဲ့ အတွက် ရသခံစားမှုဆိုတာ ရှိရပါတယ်..။ချစ်စရာတွေရင် ချစ်
လွမ်းစရာရှိရင် လွမ်း ငိုစရာရှိရင် ငို သနားစရာ ရှိရင် သနားတတ်ရမယ်ပေါ့လေ...။ အဲ့မဟုတ်ရင်ပဲ ကျောက်ခဲနှလုံးသားနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့သလို ခံစားမှုကင်းမဲ့နေရင် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်...။
အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်မှု လိင်ကိစ္စမှာ
တဖက်လူရဲ့ ခံစားချက်ကို မကြည့်ပဲ ကိုယ်လိုချင်တာ မရ ရအောင်ယူတတ်တာ၊ကိ်ုယ်ဆန္ဒပြည့်သွားချိန်မှာ တဖက်လူ ဆန္ဒပြည့်မှု ရှိ မရှိ မစဉ်းစားတတ်တာတွေဟာ ကြာလာတော့ တဖက်လူဟာ အိမ်ထောင်မှုကို ဒုက္ခတခုလို့ ထင်လာတတ်ပါတယ်..။ တလွဲယဉ်ကျေးမှု အစွဲအလမ်းကြောင့် တဖက်လူ ဟာလည်း ကိ်ုယ့်လိင်ဆန္ဒ မပြည့်ဝသေးတာကို ထုတ်မပြောဝံ့ မပြောရဲ၊ပြောတာဟာ ရှက်စရာတခုလို့မြင် နေတော့တယ်..။ လိင်ဆန္ဒမပြည့်ဝတာကို မပြောရဲတော့ တခြားဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ့လေးတွေကို ရမယ်ရှာပြီး အပစ်ပြောနေတော့တယ်..။
သာမန် လင်မယားကွဲရတဲ့ အကြောင်းတွေကို မေးကြည့်ရင် ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေး တခုကြောင့် ဆိုတာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်..။ တကယ်တော့ လင်မယား ပြဿနာတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ ခြင်ထောင်ထဲက စ ပါတယ်...။ ခြင်ထောင်ထဲက ကိစ္စတွေကို ခြင်ထောင်ထဲမှာပဲ ပြေလည်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိရာက မကျေလည်မှု မပြည့်ဝမှုတွေဟာ ခြင်ထောင်ပြင်ကို ရောက်လာပြီး အိမ်မှာတွေ့တဲ့ အသေးအဖွဲ့ အဆင်မပြေမှုလေးတွေကို ကမ္ဘာပျက်မတတ်အောင် အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာရှာကြရင်း ကြာတော့ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှု ဆီကို ဦးတည်သွားပါတော့တယ်...။
လူ့ဘဝမှာ လူသားကို ပဲ့ကိုင်မောင်းနှင်နေတဲ့ အရာနှစ်ခု ရှိပါတယ်တဲ့...။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ် ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းရယ်ပါတဲ့...။ ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာ လူသားရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက် လိုလားတောင့်တချက်တွေ ဖြစ်ပါသတဲ့...။ ဒါဟာ လူရဲ့ ဘဝပေး အသိစိတ်( Instincts) ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီလိုလိုလားတောင့်တမှုတွေ အပြည့်ရှိနေတဲ့ လူ့စိတ်ဟာ သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ
ပြည့်ဝမှုရှိတယ်လို့ ခံစားရချိန်မှာ ကျေနပ်မှု၊ သာယာမှု ဖြစ်နေတတ်ပြီး တစုံတခုသော အကြောင်းကြောင့် ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့၊ လိုချင်တာ မရခဲ့သော် အလို့မပြည့်စွာနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်...။ ဒီအချိန်မှာ အတ္တစိတ်( Ego ) လွန်ကဲလာပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ လူ့စည်းကမ်းတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းမပြုတော့ပဲ
တကိ်ုယ်ကောင်းငတေမာစိတ်တွေ ဝင်လာရာက စိတ်လွတ်ကိ်ုယ်လွတ်ဖြစ်ကာ အပြင်လူမှုဘဝမှာရှိသူတွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်လာပါတော့တယ်..။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ဆင်ခြင်အသိနဲ့ အချိန်မှီ ထိန်းချုပ်မှု မပြုနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ရေရှည်မှာ ပင်ကိုစိတ်ရင်း ဘယ်လောက်ကောင်းနေပေမယ့် စိတ်ယုတ်က စိတ်ရင်းကို လွှမ်းမိုးဖုံးအုပ် သွားပြီး လူယုတ်တယောက် အဖြစ်ကို ဦးတည်သွားတတ်ပါတယ်...။
လူသားဟာ မိုးပေါ်က ကျလာတဲ့ မိုးကျရွှေကိ်ုယ် မဟုတ်ပါဘူး...။ မိခင်ဝမ်းက ကျွတ်ပြီး
လောကကြီးထဲ ခြေလွတ်လက်လွတ် ဝင်လာတဲ့ အချိန်ကစ ပြင်ပက ဖိအားတွေရဲ့ ထိပါးရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံရပါတော့တယ်...။ စိတ်ရင်းသက်သက်သာရှိနေသေးတဲ့ ကလေးငယ်အရွယ်မှာ ဒီလိုဖိအား သက်ရောက်မှုတွေကို ပြုံးပျော်ဆော့ကစားရင်း ကျော်ဖြတ်လာနိုင်ပေမယ့် တဖြေးဖြေးတရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ငယ်စဉ်က
အမှတ်မထင်ခံခဲ့ရတာတွေဟာ စိတ်ဒဏ်ရာတခုလို စိတ်မှာ အမာရွတ်အဖြစ်နဲ့ စွဲထင်နေတတ်ပါတယ်...။ မီးကိုကိုင်ကြည့်ပြီး ပူမှန်းသိသွားတော့မှာ မီးနဲ့မဆော့ရဘူးဆိုတဲ့ အသိပညာတခု ရရှိသွားသလို ဒီလိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်း အသိဉာဏ်နဲ့ တစတစ ကုစားပြီး အမှားတခုအဖြစ်မှ အမှန်တခုဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှသာ တဖြေးတဖြေး နဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေဟာ အထိုက်အလျောက် ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အဲ့လို မကုစားပဲ တကိုယ်ကောင်းစိတ်နဲ့ ကျေနပ်သာယာမှုကို ရှာကြရင်း အသက်နဲ့ကိုယ်
အိုးစားကွဲသွားကြသူတွေလည်း အများကြီးပါ..။ ဘဝတလျှောက်လုံး အင်အားကြီးသူ နိုင်စတမ်း
ဆိုတဲ့ တောတွင်းနိယာမကို လက်ကိုင်ပြုပြီး လူတကာအပေါ် အနိုင်အထက်ပြုရင်း
ကိ်ုယ့်အတ္တကို ပိုးမွေးသလို တယုတယနဲ့လက်သပ်မွေးမြူနေသူတွေဟာ ကိ်ုယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်နိုင်တော့ပဲ တပါးသူအပေါ်ယုံမှားသံသယလွန်ကဲတဲ့ စိတ်ဝေဒနာ တခု
ဝင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့...။ ( Paranoidal Dementia) လို့ ခေါ်တဲ့ ဝေဒနာပါတဲ့..။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေကိုသာမက လင်မယားချင်းမှာပင် သူ့စိတ်နဲ့ အခန့်မသင့်တာတခုခုကို ပြုလိုက်တိုင်း၊ တွေ့လိုက်တိုင်း ငါ့ကိုမကောင်းလုပ်တာဖြစ်မှာပါ မကောင်းပြောတာဖြစ်မှာပါ ဆိုတဲ့ သံသယအတွေးတွေ ကြီးစိုးပြီး မကြောညာပဲ
အမွေကိစ္စတွေမှာ သားအမိ သားအဖ ညီအကို မောင်နှမ ဆွေးမျိုးရင်းချာချင်း စည်းဇိမ်ကုန်ချင်သလောက် ကုန်ပါစေ သူ့ကို ခွဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အပြန်အလှန် တရားစွဲကြရင်း တရားစရိတ်ကြောင့်မွဲသွားတဲ့ အထိဖြစ်ကြတာမျိုး၊
သူ့ခွေး ကိ်ုယ့်ခွေးကိုက်ရာက ဟိုဘက်ဒီဘက် လူချင်း ဂုဏ်တု ဂုဏ်ပြိုင်ဖြစ်ကြပြီး ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်နဲ့ မကျေနိုင် မအေးနိုင်ကြပဲ တဖက်လူ မရှုံးနိမ့်မချင်း စားမဝင် အိပ်မပျော်ဖြစ်ကာ တနုံနုံ ခံစားနေကြတာမျိုးတွေဟာလည်း ဒီလိုမျိုး ဝေဒနာရှင် စာရင်းဝင်သူတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့....။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပြောပါရစေ...။
လူတယောက်ကို ရူးတယ် မရူးဘူးဆိုတာ စိတ်ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ အလွယ်လွယ်ကူကူ
မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး..(ဒီအကြောင်းကို စာတပုဒ်အဖြစ် ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ)..။ ရူးသွပ်ခြင်း ဆိုတဲ့စကားဟာ တရားဥပဒေအရ လူတဦးရဲ့ စိတ်အနေအထားကို ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ပညာရှင်များကတော့ ရူးသွပ်တယ်ဆိုတာကို
စိတ်ရောဂါ ( Psychosis)တမျိုးလို့သာ သတ်မှတ်ကြပါတယ်တဲ့...။ စိတ်အရမ်းဖောက်ပြန်ပြီး ရူးသွပ်နေသူ တချို့ကလွဲရင် များသောအားဖြင့်
စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဟာ သာမာန်သူလိုငါလို လူတွေနဲ့ သိပ်ကွဲပြားလေ့မရှိပဲ တချို့ဆို လူကောင်းတွေလို့တောင် ထင်ရတတ်ပါတယ်...။
အခက်အခဲပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာချင်း၊ ခံစားရတာချင်းတူသည့်တိုင်
တချို့လူတွေက သာမန်စိတ်အခြေအနေအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားနိ်ုင်ကြပေမယ့် တချို့ကျ စိတ်ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်...။ တချို့တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံ ကိစ္စတွေမှာ တချို့တွေက လုံးဝရူးသွပ်သွားမျိုးလည်း ရှိပါတယ်တဲ့..။ ဒါကြောင့် လူတွေကို ဒီလို ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် ရူးသွပ်သွားနိုင်တယ်လို့ ပုံသေ သတ်မှတ်ထားလို့ မရပါဘူး..။ လူတယောက် စိတ်ဝေဒနာ ဖြစ်ပြီး ရူးသွားနိုင်ဖို့ ဆိုရာမှာ သူ့ရဲ့ ကိ်ုယ်ခံအား၊ စိတ်ခံစား၊ ဆင်ခြင်ဉာဏ်အနည်းအများ စတာတွေ အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါသတဲ့...။
( ကိ်ုယ့်စိတ်က သိနေတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိသလို အချို့ခံစားချက်တွေက သိသလို မသိလို
ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့..။ပြောရရင် တကယ်ရူးတဲ့ အရူးတိုင်းဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရူးတဲ့ အရူးဖြစ်ပါစေ သူ့ကိ်ုယ်သူ ရူးနေတယ်လို့ ထင်လေ့မရှိကြတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိ်ုယ် ငါရူးများရူးနေပြီးလား လို့ တွေးမိနေသ၍ ရူးခြင်း မရှိသေးတာမို့ စိတ်ချလက်ချ နေနိုင်အောင် ငါရူးနေပြီးလား ဆိုတာမျိုး ခဏခဏတွေး ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း ဘီးတပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ခများးး...😊😊😊😊 )
Posted by Alex Aung at 10:00 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 11:32 AM No comments: